Samsung Galaxy Watch Active 2: naseho ny famolavolana sy ny endrika | Androidsis
Hianarantsika tsikelikely ny antsipiriany momba ny Samsung Galaxy Watch Active 2, izay haseho amin'ny smartwatch Samsung iray hafa, ankoatry ny andrasana Samsung Galaxy Note 10 amin'ny 7 Aogositra. Hatramin'izao dia henontsika ilay hafahafa tsaho momba ny azo ampiasain'ny orinasa koreana manaraka, fa izao dia afaka manamarina ny volanao izahay.
Mazava ho azy, amin'ity tranga ity dia tsy miatrika tsaho na famoahana isika. Ary io no, ny manaraka Samsung Galaxy Watch Active 2 vao nandalo ny FCC, ny maso ivoho fanamarinana amerikana, manamafy ny endriny ary koa ny sasany amin'ireo fiasa izay hananan'ity fitaovana ity.
Ity no Samsung Galaxy Watch Active 2, hita miharihary ny endriny
Araka ny hitanao amin'ny sary izay mitarika ireo andalana ireo, ny smartwatch manaraka avy amin'ny orinasa Seoul dia manana fitoviana lehibe tamin'ny teo alohany. Eny, ny Galaxy Watch Active sy Active 2 dia mitovy. Aza adino, ilay maodely vaovao dia manana fiasa tena milay.
Ho an'ny vao manomboka, ny Samsung Galaxy Watch Active 2 dia tonga miaraka Fanamarinana miaramila MIL STD 810G. Inona no dikan'ity? Azo antoka izany fa hahazaka ny bonjony sy mianjera izy nefa tsy misy karazana fahasimbana. Noho izany, raha mitady smartwatch amin'ny faritra rehetra ianao, ity modely ity dia safidy tsara tokony hodinihina.
Ho fanampin'izany, ho mahatohitra ny vovoka sy ny rano izy amin'ny alalany Fanamarinana IP68 izay mamela azy hilentika ao anaty ary mahazaka ny fanerena hatramin'ny atmosfera 5, mety indrindra amin'ny filentehana miaraka aminy, ary koa ny GPS miampy sy ny fiarovana fanampiny an'ny Corning Gorilla Glass eo amin'ny efijery azy, hisorohana ny efijery an'ny Samsung Galaxy Watch Active 2 amin'ny fijaliana karazana rayon.
Mikasika ny vidin'ity smartwatch vaovao ity, dia mistery tanteraka izy io ankehitriny, fa raha raisintsika ilay maodely teo aloha dia azo inoana fa tsy hihoatra ny 300 euro izany rehefa mahatratra ny tsena. Hividy ilay Samsung Galaxy Watch Active 2?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Nanamafy ny famolavolana sy ny ampahany amin'ny mampiavaka ny Samsung Galaxy Watch Active 2
Ahoana no ahafantaranao hoe impiry ny iray amin'ireo hafatrao no nampitaina tamin'ny WhatsApp
Ny Pixel 3a dia fahombiazana amin'ny varotra